စိုကျပြိုးရငျ တဈရာသီကို မွနျမာငှသေိနျးရာခြီ ဝငျငှရေနိုငျပွီး စားသုံးရငျ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးတှရေနိုငျတဲ့ ကွာစှယျ​ / ကွာမွဈ​ - MM Live News
တဈရာသီကို မွနျမာငှသေိနျးရာခြီ ဝငျငှရေတဲ့ ကွာစှယျ​ / ကွာမွဈ​
Ref : China Plus / ဘကေငျြး၊ စကျတငျဘာ – ၂၂
ဆောငျးရာသီကို ဝငျလာပွီဆိုတာနဲ့ တရုတျနိုငျငံ ကနျြးစီးပွညျနယျ မှ လယျသမားမြားဟာ ကွာပငျရဲ့အမွဈ တူးဖျောတဲ့လုပျငနျးကု ဆောငျရှကျရငျး အလုပျမြားလို့နကွေပါပွီ။ကွာမွဈဟာ တရုတျနိုငျငံတှငျးမှာ အလှနျကြျောကွားလှတဲ့ ဟငျးလြာ တဈမြိုးလညျး ဖွဈပါတယျ။
ထူထပျလှတဲ့ ရှံ့နှံ့တောထဲကနေ ရှုပျထှေးနတေဲ့ ကွာမွဈတှကေို အရယူဖို့အတှကျ သငျ့လြျောတဲ့စကျပစ်စညျး ကွံဆတီထှငျနိုငျ ခွငျး မရှိသေးတာကွောငျ့ လူ့လုပျအားဟာ ကွာမွဈတူးဖျောရေးမှာ အဓိက အခနျးကဏ်ဍကရှိနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။
လယျသမားတှဟော တဈရကျကို ရှဈနာရီကြျောလောကျ ရကေနျထဲမှာ ကွာမွဈမြား တူးဖျောကွရပါတယျ။ယဘေုယပြွောရလြှငျတော့ လူတဈဦးဟာ နစေ့ဉျ ကွာမွဈ ၁၀၀ ကီလိုဂရမျ ဝနျးကငျြလောကျ စုဆောငျးနိုငျပါလိမျ့မယျ။
ဒီလိုလကျဝငျခကျခဲတဲ့ အလုပျအပွီးမှာ လယျသမားမြားဟာ တဈရာသီကို ဒျေါလာ ၈၀၀၀ (မွနျမာ ငှကေပျြ သိနျး ၁ဝဝကြျော) လောကျ ဝငျငှရေရှိကွပါတယျ။
ကွာမွဈဟာ အစိမျးအတိုငျးဖွဈစေ၊ ဟငျးလြာအဖွဈ ခကျြပွုတျပွီးဖွဈစေ စားသုံးနိုငျပွီး အနညျးငယျ ခါးသကျသကျအရသာရှိကာ၊ ကွှပျရှတဲ့ ခံစားမှုကိုပေးပါတယျ။
ဖိုငျဘာအမြှငျဓာတျမြားစှာပါဝငျတဲ့ ကွာမွဈဟာ ကာဘှနျဟိုကျဒရိတျခဖြေကျြခွငျးကို လြော့ခပြေးကာ၊ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ သကွားဓာတျစုပျယူမှုကို နှေးကှေးစတောကွောငျ့ ဆီးခြိုရောဂါအတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ ဆေးဖကျဝငျအစားအစာ ဖွဈပါတယျ။
ဗီတာမငျစီ ဓာတျကွှယျဝပွီး ကနျြးမာရေးအတှကျ အထူးသငျ့လြျောတဲ့ အစားအစာတဈမြိုးလညျး ဖွဈပါတယျ။လကျ​ရှိမွနျ​မာပွညျ​ ကွာစှယျ​​ပေါကျ​​စြေး တဈ​ပိဿာ ၈၅၀၀ ၊ ၇၀၀၀ ၊ ၅၀၀၀ ကပျြ​ စားစားရှိပါတယျ
ပွညျပစြေးကှကျရှိတဲ့ကွာစှယျတကယျစိုကျသငျ့ပါတယျ…..ကွာပငျ ရဲ့ အမွဈ (ကွာစှယျ) အရှကျ ပငျစညျ အပှငျ့ အစေ့ အားလုံး စားလို့ရပါတယျ….
ကွာစှယျ၏ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးမြား ….
ကွာစှယျသညျ အာဟာရအလှနျကွှယျဝပွီး အထူးသဖွငျ့ စားသုံးရနျအတှကျ ကနျြးမာရေး ကောငျးမှနျ စသေော ဓာတျပစ်စညျးမြား မြားစှာ ပါဝငျသညျ။
ဗိုကျတာမငျ နှငျ့ သတ်တုဓာတျမြားဖွဈသော ဗိုကျတာမငျ B, C, သံဓာတျ၊ ပိုတကျစီယမျ ၊ ကော့ပါး၊ သိုကျယာမငျ၊ ဇငျ့နှငျ့ အခွားသတ်တုဓာတျမြား မြားစှာ ပါဝငျသညျ။
ဗိုကျတာမငျ မြိုးစုံနှငျ့ သတ်တုဓာတျမြား ကွှယျဝစှာ ပါဝငျမှုကွောငျ့ ကွာစှယျသညျ ကနျြးမာရေးအတှကျ မြားစှာ ကောငျးကြိုး ဖွဈစသေော အရာဖွဈသညျ။ ကွာစှယျစားသုံးခွငျးဖွငျ့ ရရှိနိုငျသော အကြိုးကြေးဇူးမြားမှာ-
၁။ ကိုယျခံအား တိုးတကျကောငျးမှနျစခွေငျး
၂။ သှေးလညျပတျမှုကောငျးစခွေငျး နှငျ့ သှေးဖိအားကို ထိနျးညှိပေးခွငျး
၃။ အစာကွစေခွေငျး နှငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျ လြော့ကစြရေနျ ကူညီပေးခွငျး
၄။ စိတျဖိစီးမှုလြော့ကစြရေနျ ကူညီပေးပွီး၊ နှလုံးကနျြးမာရေးကို ကောငျးမှနျစခွေငျး
ကွာစှယျတှငျ ထူးခွားမြားပွားစှာ ပါဝငျသော ဗိုကျတာမငျ C ကွောငျ့ ခန်တာကိုယျ၏ ခုခံစှမျးအားကို တိုးတကျကောငျးမှနျစပွေီး ကိုယျခံစှမျးအား ကို ကနျြးမာကွံ့ခိုငျစသေညျ။
လူ၏ ခန်တာကိုယျအတှငျး ကငျဆာဖွဈစနေိုငျသော Free Radicals မြားကို ခဖြေကျြပေးပွီး ကိုယျအင်ျဂါအစိတျ အပိုငျးမြား၊ အရပွေား နှငျ့ သှေးကွောမြားကို သနျမာစသေညျ။
ကော့ပါးနှငျ့ သံဓာတျတို့ပေါငျးစပျပါဝငျမှုကွောငျ့ ကိုယျခန်တာအတှငျး သှေးလညျပတျမှု ကို ကောငျးမှနျစပေါသညျ။ သှေးအားနညျးရောဂါဖွဈစနေိုငျမညျ့ အလားအလာကိုလညျး လြော့နညျးစေ ပွီး စှမျးအငျတိုးပှားစပေါသညျ။
ကွာစှယျတှငျ ပါဝငျသော ပိုတကျစီယမျသညျ သှေးဖိအားကို ထိနျးညှိရာတှငျ အကူအညီပေး သညျ။ ပိုတကျစီယမျသညျ သှေးကွေားမြားကို ပွလြေော့စပွေီး ခန်တာကိုယျအတှငျး အရညျဓာတျပါ ဝငျမှု ကို အခြိုးညီမြှစပွေီး သှေးလညျပတျမှုကို တိုးတကျကောငျးမှနျစသေညျ။
နှလုံးရောဂါနှငျ့ ဆီခြိုရောဂါဖွဈစနေိုငျမညျ့ အန်တရာယျမှ ကငျးဝေးစသေညျ့ အမြှငျဓာတျမြား မွောကျမြားစှာ ပါဝငျခွငျးသညျ အစာခခြွေငျးကို ကောငျးမှနျစပွေီး ဝမျးခြုပျခွငျးကို လြော့နညျးစေ သညျ။
သငျစားသုံးသော အစားအစာမြားတှငျ အသားဓာတျမြား နှငျ့ အာဟာရဓာတျမြား စှာ ပါဝငျသော အစားအစာမြား ကို စားသုံးနသေညျ့တိုငျ ကွာစှယျကို စားသုံးပါက ကွာစှယျသညျ ကယျလိုရီနညျးပါး သော အစားအစာ ဖွဈသညျ့အတှကျ ခန်တာကိုယျအလေးခြိနျ ထိနျးထားရနျ အတှကျ လညျးကောငျး၊ ကိုယျအလေးခြိနျ လြော့ကစြရေနျ အတှကျ လညျးကောငျး ကူညီပေးပါသညျ။
ဗိုကျတာမငျ B တှငျ ပိုငျရီဒေါကျဇငျး ပါဝငျပွီး ၎င်းငျးသညျ စိတျအာရုံစုစညျးမှု အားကောငျး စသေညျ့ အပွငျ စိတျပွလြေော့စသေညျ။ ခေါငျးကိုကျခွငျးကို လြော့နညျးစရေနျ ကူညီပေးသညျ့ အပွငျ စိတျဖိစီးမှုကို လြော့ကစြသေညျ။
ပိုငျရီဒေါကျဇငျးသညျ နှလုံးကနျြးမာရေးကို တိုးတကျကောငျးမှနျစပွေီး နှလုံးသှေးကွော ရုတျတရကျပိတျဆို့ခွငျး အန်တရာယျကို လြော့နညျးစရေနျ ကူညီပေးသညျ။ကာပငျ ရဲ့ အမွဈ (ကွာစှယျ) အရှကျ ပငျစညျ အပှငျ့ အစေ့ အားလုံး စားလို့ရပါတယျ….
ကြျောကြျော(NARD) / ၆.၉.၂၀၁၉ #Healthbenefitsoflotusroot / #lotusroot
Ref : China Plus / ဘေကျင်း၊ စက်တင်ဘာ – ၂၂
ဆောင်းရာသီကို ၀င်လာပြီဆိုတာနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ကျန်းစီးပြည်နယ် မှ လယ်သမားများဟာ ကြာပင်ရဲ့အမြစ် တူးဖော်တဲ့လုပ်ငန်းကု ဆောင်ရွက်ရင်း အလုပ်များလို့နေကြပါပြီ။ကြာမြစ်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံတွင်းမှာ အလွန်ကျော်ကြားလှတဲ့ ဟင်းလျာ တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထူထပ်လှတဲ့ ရွှံ့နွံ့တောထဲကနေ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ ကြာမြစ်တွေကို အရယူဖို့အတွက် သင့်လျော်တဲ့စက်ပစ္စည်း ကြံဆတီထွင်နိုင် ခြင်း မရှိသေးတာကြောင့် လူ့လုပ်အားဟာ ကြာမြစ်တူးဖော်ရေးမှာ အဓိက အခန်းကဏ္ဍကရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လယ်သမားတွေဟာ တစ်ရက်ကို ရှစ်နာရီကျော်လောက် ရေကန်ထဲမှာ ကြာမြစ်များ တူးဖော်ကြရပါတယ်။ယေဘုယျပြောရလျှင်တော့ လူတစ်ဦးဟာ နေ့စဉ် ကြာမြစ် ၁၀၀ ကီလိုဂရမ် ၀န်းကျင်လောက် စုဆောင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုလက်ဝင်ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်အပြီးမှာ လယ်သမားများဟာ တစ်ရာသီကို ဒေါ်လာ ၈၀၀၀ (မြန်မာ ငွေကျပ် သိန်း ၁၀၀ကျော်) လောက် ၀င်ငွေရရှိကြပါတယ်။
ကြာမြစ်ဟာ အစိမ်းအတိုင်းဖြစ်စေ၊ ဟင်းလျာအဖြစ် ချက်ပြုတ်ပြီးဖြစ်စေ စားသုံးနိုင်ပြီး အနည်းငယ် ခါးသက်သက်အရသာရှိကာ၊ ကြွပ်ရွတဲ့ ခံစားမှုကိုပေးပါတယ်။
ဖိုင်ဘာအမျှင်ဓာတ်များစွာပါဝင်တဲ့ ကြာမြစ်ဟာ ကာဘွန်ဟိုက်ဒရိတ်ချေဖျက်ခြင်းကို လျော့ချပေးကာ၊ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သကြားဓာတ်စုပ်ယူမှုကို နှေးကွေးစေတာကြောင့် ဆီးချိုရောဂါအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ဆေးဖက်ဝင်အစားအစာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီတာမင်စီ ဓာတ်ကြွယ်ဝပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးသင့်လျော်တဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။လက်​ရှိမြန်​မာပြည်​ ကြာစွယ်​​ပေါက်​​ဈေး တစ်​ပိဿာ ၈၅၀၀ ၊ ၇၀၀၀ ၊ ၅၀၀၀ ကျပ်​ စားစားရှိပါတယ်
ပြည်ပဈေးကွက်ရှိတဲ့ကြာစွယ်တကယ်စိုက်သင့်ပါတယ်…..ကြာပင် ရဲ့ အမြစ် (ကြာစွယ်) အရွက် ပင်စည် အပွင့် အစေ့ အားလုံး စားလို့ရပါတယ်….
ကြာစွယ်၏ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ ….
ကြာစွယ်သည် အာဟာရအလွန်ကြွယ်ဝပြီး အထူးသဖြင့် စားသုံးရန်အတွက် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန် စေသော ဓာတ်ပစ္စည်းများ များစွာ ပါဝင်သည်။
ဗိုက်တာမင် နှင့် သတ္တုဓာတ်များဖြစ်သော ဗိုက်တာမင် B, C, သံဓာတ်၊ ပိုတက်စီယမ် ၊ ကော့ပါး၊ သိုက်ယာမင်၊ ဇင့်နှင့် အခြားသတ္တုဓာတ်များ များစွာ ပါဝင်သည်။
ဗိုက်တာမင် မျိုးစုံနှင့် သတ္တုဓာတ်များ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်မှုကြောင့် ကြာစွယ်သည် ကျန်းမာရေးအတွက် များစွာ ကောင်းကျိုး ဖြစ်စေသော အရာဖြစ်သည်။ ကြာစွယ်စားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများမှာ-
ကြာစွယ်တွင် ထူးခြားများပြားစွာ ပါဝင်သော ဗိုက်တာမင် C ကြောင့် ခန္တာကိုယ်၏ ခုခံစွမ်းအားကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေသည်။
လူ၏ ခန္တာကိုယ်အတွင်း ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သော Free Radicals များကို ချေဖျက်ပေးပြီး ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ် အပိုင်းများ၊ အရေပြား နှင့် သွေးကြောများကို သန်မာစေသည်။
နှလုံးရောဂါနှင့် ဆီချိုရောဂါဖြစ်စေနိုင်မည့် အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေသည့် အမျှင်ဓာတ်များ မြောက်များစွာ ပါဝင်ခြင်းသည် အစာချေခြင်းကို ကောင်းမွန်စေပြီး ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို လျော့နည်းစေ သည်။
သင်စားသုံးသော အစားအစာများတွင် အသားဓာတ်များ နှင့် အာဟာရဓာတ်များ စွာ ပါဝင်သော အစားအစာများ ကို စားသုံးနေသည့်တိုင် ကြာစွယ်ကို စားသုံးပါက ကြာစွယ်သည် ကယ်လိုရီနည်းပါး သော အစားအစာ ဖြစ်သည့်အတွက် ခန္တာကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းထားရန် အတွက် လည်းကောင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေရန် အတွက် လည်းကောင်း ကူညီပေးပါသည်။
ဗိုက်တာမင် B တွင် ပိုင်ရီဒေါက်ဇင်း ပါဝင်ပြီး ၎င်းသည် စိတ်အာရုံစုစည်းမှု အားကောင်း စေသည့် အပြင် စိတ်ပြေလျော့စေသည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို လျော့နည်းစေရန် ကူညီပေးသည့် အပြင် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေသည်။
ပိုင်ရီဒေါက်ဇင်းသည် နှလုံးကျန်းမာရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး နှလုံးသွေးကြော ရုတ်တရက်ပိတ်ဆို့ခြင်း အန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေရန် ကူညီပေးသည်။ကာပင် ရဲ့ အမြစ် (ကြာစွယ်) အရွက် ပင်စည် အပွင့် အစေ့ အားလုံး စားလို့ရပါတယ်….
ကျော်ကျော်(NARD) / ၆.၉.၂၀၁၉ #Healthbenefitsoflotusroot / #lotusroot
ဒီကလေးကို တက္ကသိုလ်​သာ ပို့လိုက်​ပါ​တော့ ဆရာမရယ်
March 1, 2019 MM Live News
ကားမောင်းတဲ့ လူတိုင်းသိထားသင့်တယ်။ယနေ့အချိန်မှာ ယာဉ်ကြီးယာဉ်ငယ်မရှိတော့ပါ…